कर्णालीमा पछिल्लो २४ घण्टामा गरिएको ३ सय २ - theoceannews.com
कर्णालीमा पछिल्लो २४ घण्टामा गरिएको ३ सय २
Tireless rainfall prompts dozens of road closures around NSW
Business Drinks Entertainment Fashion FEATURED Gadgets Health latest TOP STORIES
May 1, 2021 May 1, 2021 OCEANNEWS	0 Comments
सुर्खेत । कर्णालीमा पछिल्लो २४ घण्टामा गरिएको ३ सय २ जनाको पीसीआर परीक्षणमा २ सय १४ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै सुर्खेतका १ सय ७२ जना रहेका छन् ।
यस्तै, दैलेखका २१, जुम्लाका ९, कालिकोटका ४, मुगुका १ र अन्य प्रदेशका ७ जनामध्ये बाँकेका ३, बर्दियाका २ तथा काठमाडौं र प्युठानका १–१ छन् ।
पछिल्लो २४ घण्टामा ४ सय ३७ जनामा गरिएको र्यापिड एन्टीजेन परीक्षणमा ४५ जनामा कोरोना पुष्टि छ । पुष्टि हुनेमा दैलेखका ११, जुम्ला र कालिकोटका १३–१३, डोल्पाका ६ र मुगुका २ जना रहेका छन् ।
यस्तै कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो २४ घण्टामा कर्णालीमा थप तीन जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले जनाएको छ । मृत्यु हुनेमा सल्यानका दुई र सुर्खेतका एक जना छन् । कर्णालीमा दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणबाट मात्रै १६ जनाको मृत्यु भएको छ ।
यसअघि पहिलो चरणको कोरोना संक्रमणबाट ३४ जनाको मृत्यु भएको निर्देशनालयको भनाई छ । कर्णालीमा हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या एक हजार ६ सय ३३ पुगेको छ । निर्देशनालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा आइसोलेसनमा बसेका १० जनाले कोरोना जितेका छन् ।
वैशाख, २०७८ शनिवार
पञ्चमी – मजदुर दिवस
एमाले नेता झलनाथ खनाललाई कोरोना संक्रमण, नर्भिकमा भर्ना
काठमाडौं । एमाले नेता झलनाथ खनाल कोरोनाबाट संक्रमित भएका छन् । संक्रमित भएका उनलाई काठमाडौंको थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । nepalwatch
बाँकेमा अहिलेसम्म कोरोनाबाट २३८ को मृत्यु
बाँके । नेपालगञ्जस्थित अस्पतालमा भर्ना भएका थप तीन कोरोना सङ्क्रमितको शनिबार मृत्यु भएको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१ निवासी ४५ वर्षीय पुरुष,४ निवासी ५८ वर्षीया महिला
कर्णालीमा २१४ संक्रमित थपिए, तीनको मृत्यु
सुर्खेत । कर्णालीमा पछिल्लो २४ घण्टामा गरिएको ३ सय २ जनाको पीसीआर परीक्षणमा २ सय १४ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै
← Tireless rainfall prompts dozens of road closures around NSW
August 11, 2020 OCEANNEWS	0
August 21, 2020 OCEANNEWS	0
August 25, 2020 OCEANNEWS	0
May 1, 2021 May 1, 2021 OCEANNEWS	0
सुर्खेत । कर्णालीमा पछिल्लो २४ घण्टामा गरिएको ३ सय २ जनाको पीसीआर परीक्षणमा २ सय १४ जनामा कोरोना पुष्टि भएको
March 21, 2021 March 21, 2021 OCEANNEWS	0
September 16, 2020 OCEANNEWS	0
September 11, 2020 September 11, 2020 OCEANNEWS	0
August 27, 2020 August 28, 2020 OCEANNEWS	0
Changing weather brings more fire fears in California
August 23, 2020 OCEANNEWS	0
Ocean News is Nepal's rising news portal which delivers the latest breaking news and information on latest top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, and so on.Committed asanews portal in favor of the nation, nationality, democracy and the general public, truthful news based on relatively clear ideas and facts will be its main motto.
Copyright © 2021 theoceannews.com. All rights reserved.